कोरोनासँगै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकार अघि बढेको छ : राज्यमन्त्री दुगड | Himalaya Post
Posted by Himalaya Post | १५ आश्विन २०७७, बिहीबार २०:०४ |
– मोती दुगड
राज्यमन्त्री : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
बन्दाबन्दी खुलेपछी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन के कस्ता प्रयासहरु भइरहेका छन् ?
अहिलेसम्म कोरोनाको जोखिम कायम छ । संक्रमण बढ्दो क्रममा छ । समुदायमा, उद्योग करखानामा पनि बढ्दै गएको छ । यद्यपि, सँधै लडकाउन गरेर बस्न सकिदैन । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ । यस्तो महामारीको वेला अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउने भन्ने चुनौती सरकारलाई छ ।
उद्योग खुल्न थालेका छन् । तर उद्योग खुलेपछि उद्योगलाई कच्चा पदार्थको आवश्यकता पर्छ, बजारको आवश्यकता पर्छ । सरकारले त्यो सहजीकरण गरिरहेको छ । बजार खुलेपछि कालोबजारी नहोस्, सामानको अभाव नहोस् भनेर उद्योग वाणिज्य क्षेत्र चलायमान बनाउने कामहरु गरिरहेका छौँ । स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन, बजार लगायत सबै क्षेत्रमा अनुगमन पनि बढाएका छौँ । उद्योगमा कामदारको अभाव नहोस् भनेर श्रमिक व्यवस्थापन, कच्चा पदार्थको जिम्मेवारी पनि सरकारले लिएको छ ।
आर्थिक राहत प्याकेजहरु ल्याएका छौँ । बैंकको व्याज घटाउने, कर्जा सिमा बढाउने, सरकारलाई तिर्नुपर्ने करको समयसीमा बढाउने, बिजुली महशुलमा छूट दिने लगायतका विभिन्न राहतका प्याकेजहरु सरकारले ल्याएको छ । बेरोजगारी हटाउन र उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन विशेष किसिमका राहतका प्याकेजहरु ल्याएका छौँ । प्रधानमन्त्रीको कसैले पनि भोको बस्नुपर्दैन भन्ने अभिव्यक्तिअनुसार सरकारले काम गरिरहेको छ ।
उद्योगको संरक्षण प्रवद्र्धन र गति दिन के कस्ता योजनाहरु बनाउनुभएको छ ?
हामीले कोरोनाको अवधिमा अर्थतन्त्र धरासयी भएपछि माथि भने जस्तै छोटो समयका लागि केही योजना बनायौँ । तर हामी दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गरिरहेका छौँ । अहिले लाखौँ युवा बेरोजगार छन्, विदेशबाट पनि काम गुमाएर फर्किएकाको संख्या ठूलो छ । हामी देशभित्रै कोहीपनि बेरोजगार बस्ननपर्ने गरी योजना बनाएर काम गरिरहेका छौँ ।
अहिले हामीलाई आवश्यक खाद्य सामाग्रीको ४० प्रतिशत मात्र उत्पादन देशभित्र हुन्छ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुनका लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ ।
रुघ्ण उद्योग सञ्चालन, नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि काम भइरहेका छन्, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको छ ।
विस्तारै नेपालले प्रविधिमा पनि फड्को मार्न थालेको छ । नेपालमै कम्प्युटर, रोबर्ट बनाउने जस्ता काम पनि भएका छन् । हामी देशभित्र प्रविधिको विकाश गर्ने गरी काम गर्ने योजनामा छौँ । यो सरकार बनेपछि देशमा धेरै काम गर्न सकिने वतावरण बनेको छ । आगामी दिनमा यी विषयमा अझ गम्भीर ढंगले हामी अघि बढ्छौँ ।
सरकारले विकास र समृद्धि एजेन्डा बोकेको छ, ५ वर्ष सम्ममा यसको महशुस हुने गरी काम हुन्छ त ?
विकाश र समृद्धिको नारा अनुसार नै काम अघि बढिरहेको थियो । औधोगिक विकाश, निर्माणको काम, रोजगारी सिर्जना लगायतका विभिन्न काम भएका थिए । अर्थतन्त्र सुरक्षित स्थानमा आइसकेको थियो । जनताहरु पनि खुशी र सन्तुष्ट थिए । तर कोरोना आएपछि यो महामारीको केही प्रभाव भने परेको छ । योजनाहरुलाई भताभुङ्ग बनाएको छ । यद्यपि, हामी चुप लागेर बस्दैनौँ ।
हामी सक्षम छौँ, कोरोनासँग सँगै अर्थतन्त्र चलायमान राख्न काम गरिरहेका छौँ । लकडाउनको वेला पनि एक दिन पनि लकडाउन नगरेर मन्त्रालयहरुले काम गरे, गरिरहेकै छन् ।
नेकपा भित्रको विवाद अब टुँगिएको हो ?
पार्टीभित्र फरक विचारहरु आउनु सामान्य हो । यस्ता समस्या आइरहन्छन् । विचारमा मतभिन्नता हुनु ठूलो समस्या होइन । हाम्रा नेताहरु ठूलो त्याग र तपस्याबाट यहाँसम्म आएकाले पार्टीमा समस्या नहुने गरी उहाँहरुले काम गरिरहनुभएको छ, समस्या समाधान भइसकेको छ ।
आन्तरिक कुरालाई लिएर बाहिरी तत्वले केही भ्रम छर्ने र चलखेल गर्ने भने हुनसक्छ । तर यी कुरामा पार्टी विचलित हुँदैन ।
कोरोना महामारीले विश्वलाई नै इतिहासको जटिल मोडमा पूर्याएको छ । तर यो भन्दैमा हामी कसैले पनि मनोबल गिराउनुहुँदैन, आत्मबल बढाएर यो रोगसँग लड्न सकिन्छ । यस्ता समस्याहरु आइरहन्छन् । नेपालीहरु अनुशासित र संयमित छन्।
अनुशासन र संयम कायम गरेर स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर दैनिक जीवन सामान्य बनाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ र जनताले पनि यसलाई मध्यनजर गर्नुपर्छ ।
रेमिट्यान्सले देश चल्दैन । आन्तरिक औधोगिक विकाश नभई देश अगाडि बढ्दैन । त्यसैले नेपालमै काम गरौँ, व्यवसाय गरौँ, उद्योग धन्दा चलाऔँ, सरकारले व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहित गर्छ ।
Previousबिग मार्टमा इसेवा तथा फोनपेबाट भुक्तानी गर्दा २५ प्रतिशतसम्म छुट
Next“व्यक्तिगत आकांक्षाभित्र धरमराएको महासंघले निर्वाचनबाट लय समातोस्”
आज दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)को उद्घाटन हुँदै, कार्यक्रम तीन घण्टा २४ मिनेट लामो रहने
१५ मंसिर २०७६, आईतवार ०९:२२
महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढ्यो, आवागमन बन्द
२१ श्रावण २०७६, मंगलवार १२:१७